တဈကမ်ဘာလုံးကပရိသတျမြားကို အားပေးစကားပွောကွားလိုကျသညျ့ မငျးသားကွီး Arnold – SoShwe
Home/Entertainment/တဈကမ်ဘာလုံးကပရိသတျမြားကို အားပေးစကားပွောကွားလိုကျသညျ့ မငျးသားကွီး Arnold
တဈကမ်ဘာလုံးကပရိသတျမြားကို အားပေးစကားပွောကွားလိုကျသညျ့ မငျးသားကွီး Arnold
So Shwe April 21, 2020	Entertainment Leaveacomment
မငျးသားကွီး Arnold အဖွဈ လူသိမြားသညျ့ Arnold Schwarzenegger က သူ့ရဲ့အငျစတာဂရမျမှတဈဆငျ့ ပရိသတျမြားကို အားပေးစကာပွောကွားလိုကျကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ အဆိုပါမငျးသားကွီးသညျ California ဒသေရှိ Santa Monica ကမျးခွေ၌ စကျဘီးတဈစီးပျေါထိုငျကာ နှာခေါငျးစညျးတပျထားသညျ့ သူ့ရဲ့ဓာတျပုံဖွငျ့ “ကြှနျတျောတို့အားလုံးပွနျလာကွမယျ။” ဟု ရေးသားကာ အားပေးခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါစကားသညျ (၁၉၈၄) ခုနှဈ၌ နာမညျကြျောကွားခဲ့သော သူ့ရဲ့ The Terminator ဇာတျကားမှ ပွောစကားကို ယူဆောငျအသုံးပွုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
မငျးသားကွီး Arnold က “ကြှနျတျောတို့အားလုံး ပွနျလာကွမယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဒီအရာကွီးကို အတူတကှ ကြျောဖွတျကွပါမယျ။” ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပရိသတျမြားအတှကျ နှာခေါငျးစညျးဝယျယူနိုငျသညျ့ Link တဈခုကို တငျပေးထားပွီး အဆိုပါနှာခေါငျးစညျးရောငျးခရြာမှ ရရှိသညျ့ငှကွေေးအားလုံးကို ကြောငျးသားမြားအတှကျ အစားအသောကျမြားထောကျပံ့ပေးရနျ ရညျရှယျထားကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
California ဒသေအာဏာပိုငျမြားကလညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှုနှုနျးမွငျ့မားနသေညျ့ အနအေထား၌ အသကျ (၆၀) နဲ့အထကျ သကျကွီးရှယျအိုမြားကို အိမျထဲ၌သာနထေိုငျရနျ ညှနျကွားထားပွီး Arnold က သူ့ရဲ့အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျမြားနဲ့သာ အခြိနျကုနျဆုံးလကျြရှိပါတယျ။ Arnold ကလညျး “ကြှနျတျောကတော့ ဒါတှပေဲ လုပျနရေပါတယျ။ အပွငျမသှားရဘူး။ စားသောကျဆိုငျတှမေသှားရဘူး။ ဘာမှလညျးလုပျလို့မရပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့မွညျးလေး Lulu နဲ့အခြိနျကုနျဆုံးရတယျ၊ ဝီစကီသောကျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ကောငျးမှနျတဲ့အခြိနျတှကေို ဖွတျသနျးခဲ့ရပွီး အပငျြးလညျးပွရေပါတယျ။” ဟု ပွောကွားခဲ့ဖူးကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးကပရိသတ်များကို အားပေးစကားပြောကြားလိုက်သည့် မင်းသားကြီး Arnold
မင်းသားကြီး Arnold အဖြစ် လူသိများသည့် Arnold Schwarzenegger က သူ့ရဲ့အင်စတာဂရမ်မှတစ်ဆင့် ပရိသတ်များကို အားပေးစကာပြောကြားလိုက်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါမင်းသားကြီးသည် California ဒေသရှိ Santa Monica ကမ်းခြေ၌ စက်ဘီးတစ်စီးပေါ်ထိုင်ကာ နှာခေါင်းစည်းတပ်ထားသည့် သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံဖြင့် “ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်လာကြမယ်။” ဟု ရေးသားကာ အားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစကားသည် (၁၉၈၄) ခုနှစ်၌ နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သော သူ့ရဲ့ The Terminator ဇာတ်ကားမှ ပြောစကားကို ယူဆောင်အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသားကြီး Arnold က “ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပြန်လာကြမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအရာကြီးကို အတူတကွ ကျော်ဖြတ်ကြပါမယ်။” ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပရိသတ်များအတွက် နှာခေါင်းစည်းဝယ်ယူနိုင်သည့် Link တစ်ခုကို တင်ပေးထားပြီး အဆိုပါနှာခေါင်းစည်းရောင်းချရာမှ ရရှိသည့်ငွေကြေးအားလုံးကို ကျောင်းသားများအတွက် အစားအသောက်များထောက်ပံ့ပေးရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
California ဒေသအာဏာပိုင်များကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားနေသည့် အနေအထား၌ အသက် (၆၀) နဲ့အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို အိမ်ထဲ၌သာနေထိုင်ရန် ညွန်ကြားထားပြီး Arnold က သူ့ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့သာ အချိန်ကုန်ဆုံးလျက်ရှိပါတယ်။ Arnold ကလည်း “ကျွန်တော်ကတော့ ဒါတွေပဲ လုပ်နေရပါတယ်။ အပြင်မသွားရဘူး။ စားသောက်ဆိုင်တွေမသွားရဘူး။ ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော့်မြည်းလေး Lulu နဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးရတယ်၊ ဝီစကီသောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး အပျင်းလည်းပြေရပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့ဖူးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Previous ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ရနေံစြေးကှကျပကျြစီးရပွီလား ? ? ?
Next ဖုနျးအာမခံသကျတမျးမြားကို တိုးမွှငျ့ပေးလိုကျသညျ့ ဖုနျးကုမ်ပဏီမြား။